I-Jamieson Cottage, indawo yakho yokuhlala ethule - I-Airbnb
I-Jamieson Cottage, indawo yakho yokuhlala ethule
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Craig And Karen
U-Craig And Karen Ungumbungazi ovelele
Indawo yakho. I-cottage ehlukene nendlu enesango lakho lokungena, indawo yokuhlala nendawo yokupaka evikelekile ngemuva kwesango elisetshenziswa kude.
Iphelele uma uza kwezamabhizinisi, izivakashi NOMA oshiseka kakhulu kwezemidlalo ngebhola lombhoxo nekhilikithi yaseNewlands eseduze futhi uma sibala isibhedlela sezingane iRed Cross Children's 2 mins uma ushayela.
Ukhululekile, Uhlanzekile futhi Ukhululekile. Kuhle njengenkambu yokuhlola iKapa kanye nezindawo eziseduze kwayo kufanele kunikelwe.
Itholakala kahle e-Rondebosch - indawo emaphakathi:
Imizuzu eyi-12 ukuya eKapa CBD (inhliziyo yaseKapa)
Imizuzu eyi-15 ukuya ebhishi laseMuizenberg
Imizuzu emi-5 ukuya eNewlands yekhilikithi neRugby.
4.93 · 177 okushiwo abanye
I-Jamieson Cottage iyindlwana etholakala endaweni yomnikazi wayo, elise-Rondebosch, eKapa. Ikotishi lisendaweni ekahle eduze nenqwaba yezindawo ezikhangayo ezindaweni eziseningizimu, kubandakanya ne-UCT.
Leli kotishi linomnyango walo ohlukile futhi lihlanganisa indawo yokuhlala evulekile. Indawo yokulala inombhede ophindwe kabili, kanti igumbi lokugezela le-en-suite lineshawa. Indlu yangasese ihlukene. Ikhishi eliseduze linezindawo zokushisa nezokudla ezifana nesiqandisi sebha, ihhavini ye-microwave, nezinsiza zokwenza itiye nekhofi.
Ngaphezu kwalokho, i-cottage ine-TV eneziteshi ezikhethiwe ze-DStv kanye ne-inthanethi ye-Wi-Fi yamahhala. Indawo yokupaka evikelekile iyatholakala emotweni engu-1. I-Jamieson Cottage isendaweni eyimizuzu emi-5 ukuya kweyi-15 ukusuka ezinkundleni zemidlalo zekhilikithi ne-Rugby, izitolo nezindawo zokudlela, kanye ne-Kenilworth Racecourse, uma sibala izindawo ezimbalwa ezindaweni eziseningizimu.
Ibungazwe ngu-Craig And Karen
buza umuntu wakhona uzokutshela . Singakunikeza ukuqonda kwethu eKapa
UCraig And Karen Ungumbungazi ovelele